ဗမာစာ သည် ..ဒို့စာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ဘယ်လိုစံနဲ့သတ်မှတ်လဲဆိုတာ ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တရားစီရင်ရေး သန့်ရှင်းမျှတတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ဖို့ သမ္မတကြီးက ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကိုတောင်းဆိုတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မမျှတ၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ တရားစီရင်ရေးတွေ သန့်ရှင်းမျှတဖို့ အတွက် ဘယ်သူ့ကို တောင်းဆိုရမလဲဟင် »
ဗမာစာ သည် ..ဒို့စာ
သူငယ်ချင်းတယောက် သူ့စေတနာနဲ့သူ အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်တွေကို ဗမာလို ဘာသာပြန် ထုတ်ချင်ပါတယ် ဆိုလို့….
(Opps….ဒီကောင် ဘယ်တုန်းက. OG ဘွဲ့ ရသွားပါလိမ့်)
တင်လတ်နဲ့ညီများ ဘောဂျွိုင့် လဲသည်
(Eeep…သူလည်း ယောက်ကျားတွေအတွက် အားကျမခံပါလား)
ကိုနွဲ့ နှင့် တပည့်များ ဘော်ဒီထုသည်
(ကြည့်စမ်း ဒီလူကြီး ရုပ်က ဘုရားလူကြီးရုပ်နဲ့..
အောင်နိင် ဘိုရိန်သ သည်
သင်၏ အပေါက်များ(အင်ဂျင်) ချောမွေ့စေ၍ ဆီစားသက်သာစေမည်
(သေနာ…အပေါက်ချောအောင် စေတနာ ဗလပွနဲ့)
(Oh la la..ဂျီးဒေါ်. စေတနာတွေ ပိုနေတာ ချောဆီတဲ့ ချောဆီ)
(ဘုရား ဘုရား…. လောကကြီး ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်)
စိုးစိုးသန်း စီယာရင် ပြု ပြင်ရေး
မောင်မောင်ဌေး အောက်တိန်း ရောင်းဝယ်ရေး
(ကြည့်စမ်း အောက်ကနေ ဆွယ်မဲ့ကောင်)
(အကောင် တောင်ယိမ်း မြောက် ယိမ်း မလုပ်နဲ့ကွ)
အခုလိုပြောတာ မချစ်လို့ ဟုတ်ဘူးနော်…
စဉ်းစဉ်းစားစားလေးလည်း လုပ်ကြပါ ဆရာတို့ရယ်.
ဗမာစာ သည် တို့စာ နဲ့. အောက်တန်းကျခဲ့ တာ နှစ်နွေ ဘယ်လောက်ရှိပြီလည်း
By Silver Twig
ငါက အခြေခံပညာ အထက်တန်း အဆင့်မှာ တချိူ့ဘာသာတွေ မြန်မာလို သင်မယ် ဆုိုတာ လက်မခံတဲ့ ဘက်က နေခဲ့တယ် … ဘာလုို့လဲ … သူတုို့ထဲက အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်မယ့်လူတွေ ဆရာဝန်ဖြစ်မယ့်လူတွေ စတဲ့ ပညာရှင် ဖြစ်မဲ့ လူတွေ နုိုင်ငံတကာအဆင့်ကုို တက်ရင် ခက်မစိုးလို့ … ငါတုို့တုံးက ၁၀တန်းရော ဒေသရော မြန်မာလုို သင်ခဲ့တော့ RIT Third Year မှာ ဘယ်လောက် ဒုက်ခရောက်ခဲ့လဲ … ဒါပေမဲ့ Statics & Dynamcis ၂အုပ် ပြီးတော့ We know how to do self study လေ … ၀မ်းစာ ပြည့်ပြီးရင် ဘိုလို သင်တဲ့ တစ်နှစ်ထဲ လိုပါတယ် သူငယ်ချင်း … ၁၀တန်း ရူပ၊ ဓာတု၊ ဇီဝ မြန်မာလို သင်မှာကို မကြိုက်ပေမဲ့ အခု ကိုအေးငြိမ်း လုပ်ငန်း အတတ်ပညာစာအုပ်တွေကို မြန်မာလို ရေးမဲ့ ကိစ်စကုို ငါမကန့်ကွက်ခဲ့ဘူး … ငါကုိုယ်တုိုင်လဲ တစ်အုပ်ရေးမလို့ စိတ်ကူးထားတယ် … ဘာလို့လဲ … ငါ target ထားတာ high school drop out skilled labor လေ … တစ်နှစ်တစ်နှစ် ၁၀တန်း ၃နှစ်ကျ ကျောင်းထွက် အသက် ၂၀ ၀န်းကျင် လူငယ် တစ်သ်ိန်းကျော် ရှိတာ မင်း သိလား … အခု MNC တွေ ၀င်လာတော့ အဓိက ဘာလိုနေလဲရော မင်း သိလား … အင်ဂျင်နီယာ အဓိက လိုတာ မဟုတ်ဘူး သူငယ်ချင်း … skilled laobur နဲ့ technician လုိုတာ … City & Guild က baisc diploma တွေ ဘယ်လို assess လုပ်လဲ သိလား … ရေးဖြေ မဖြေရဘူး … နှူတ်ဖြေ သူငယ်ချင်း … ခုိုင်းတာကို လုပ်ပြရတယ် … လုပ်တတ်ရင် လက်မှတ်ပေးတယ် … အဲဒီတော့ ငါ့အမြင် အဲဒီ level လူငယ်တွေအတွက် ပထမအဆင့်က လုပ်တတ်ဖုို့ဘဲ … အဲဒီအဆင့်မှာ all English သင်ရင် သူတုို့အတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပုိုး ဖြစ်မယ် … basic certificate ၁လ၊ paid intership ၆လ၊ advanced certificate ၂လ၊ paid intership ၆လ ကုို တတ်နုိုင်သမျှ အင်္ဂလိပ်လို နဲနဲ လက်တွေ့များများ သွား ပြီး basic diploma ကျမှ language skill ထည့်ဖို့ စိတ်ကူးတယ် … နောက် မလေးရှားမှာ အလုပ်သွားလုပ်မဲ့ skilled labour အတွက် Bahasa နဲ့ English ဘယ်ဟာ တတ်တာ ပို အသုံးကျမလဲ ဆိုတာလဲ ချိန်ရအုံးမယ် … လုပ်ငန်းအတတ်ပညာ သင်ပေးတာနဲ့ laungage ရော လို့ရတယ် ဒါပေမဲ့ languag ကြောင့် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်ဖို့ တော့ လုိုတယ် ထင်မိတယ် … ငါတုို့ ၁၀တန်းအထိ အင်္ဂလိပ်လို သင်လာပြီး ၁၀တန်းအောင်တော့ ဘယ်လောက်များ communicate လုပ်နုိုင်လို့လဲ … မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်လုပ်မဲ့ အဖြူတွေ ၆လလောက် intensive Myanmar language training ယူပြီး workabe proficieny ရတာ သတိပြုသင့်တယ် … ဆိုလိုတာက delivery method မတူတဲ့အခါ ထိရောက်မှု ကွာသွားတာကို ပြောချင်တာ … ကို်ယ်ကတော့ skilled lobour တွေအတွက် အတတ်ပညာ ကုို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ တတ်တတ် တတ်အောင် သင်ပြီး ဘာသာစကားကို လုိုအပ်သလို ထပ် coahing လုပ်တာကို ပိုနှစ်သက်မိတယ် … ဂျပန်သွားမဲ့ welder တွေ Japanese language training ၃လနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ် … categeory မတူတာကို သတိပြုမိစေချင်တယ် … အခု ပြောတာကတော့ တတ်ဖို့ အတွက် အဓိက ပြောနေတာ … တတ်ပြီး regional accredicatation တို့ ဘာတုို့အတွက်ကတော့ laungage မလိုဘူး မဆိုပါဘူး … အလုပ်ရှင်ပေါ် မူတည်ပြီး လုိုတာ ဖြည့်ရမှာပေါ့ …
My trainees would use Myanmar NSSA (National Skill Standard Authority) curriculum which will be accredited regionally (ASEAN wise). Advanced certificate holders will be assessed by international assessors; CIDB for Malaysia, BCA for Singapore & JWF for Japan.
By Tin Latt
ပြောချင်တာ အဲ့ဒါပါပဲ ဘော်ဒါရာ မှန်မှန်ကန်ကန် လေ့ကျင့်ပေးဘို့ပဲလိုပါတယ်
လက်ရှိ ဒီမှာ M&E နဲ့ ပတ်သက်ရင် Skill Labour တော်တော်ရှားပါတယ်။ Welding ဂေါက်လေးကိုင်ပြီး တို့တတ်ရင် လုပ်တတ်ပြီလို့ ယူဆနေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ ဂွကိုင်ပြီး ရစ်တတ်ရင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ အလုပ်သမားတွေများတယ်။ ပိုက်နှစ်လုံးကို Welding တို့ပြီး ဆက်ထားလိုက်တာများ Welding သား လှမလှတော့ မပြောတတ်ဘူး။ မျက်စိထဲမှာ ပျားအုံကြီးသာ မြင်ကြည့်လိုက်ပါတော့။ အဲလောက် ဆော်ထားတာတောင် Leakage ဖြစ်သေးတယ်။ သူတို့မှာ Skill နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Knowledge လုံးလုံးမရှိဘူး။ အလုပ်က မပြီးရင် Main Con နဲ့ Sub Con တွေပဲ ရှင်းရတာ။ သူတို့က အချိန်တန် နေ့စား ပိုက်ဆံ ရဖို့ပဲ။ အလုပ်လုပ်ထားတာ Pass မဖြစ်လို့ ပြန်လုပ်ခိုင်းရင် မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ တချို့ဆို တခြားဆိုဒ်ကို ပြောင်းသွားရော။ ဒီဆိုဒ်က ရစ်တယ်၊ ဘာဖြစ်တယ်။ မလုပ်ချင်တော့ဘူး စသဖြင့် ပြောပြီး ထွက်သွားရော။ ခံရတာက M&E Sub Con တွေပါ။ Main Con ကို ဒီလိုအချက်အလက်တွေ သွားပြောလို့ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ်ရှင်းရတာပါ။ သူတို့က ဒီဘက်ဆိုဒ်က ဟိုဘက်ဆိုဒ် ပြောင်းသွားလည်း နေ့စားခက တူတူပဲဆိုတော့ လုပ်ချင်သလို လုပ်နေတာပါပဲ။ Skill သာ မပြည့်တာ အချိန်တန်တော့ နေ့စားခ တိုးလိုချင်လာပြန်ရော။ ပေးပြန်တော့ လုပ်အား တက်လာသလားဆိုရင် အဲလို ပိုများလာတဲ့သူတွေက ခိုနည်း၊ ရှောင်နည်းတွေ ပိုတတ်ပြီး အလုပ်သမား အသစ်ပါ ထပ်ပျက်တယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့ ဘယ်လိုများ ရှေ့ဆက်ကြမယ်မသိဘူး။ စင်္ကာပူဘက်က QC ကိစ္စ ဘယ်သူစစ်မလဲ။ ဘယ်လို Pass ဖြစ်မလဲဆိုရင် Sub Con တွေအနေနဲ့ တော်တော်လေးကို ဖြေရခက်တဲ့ မေးခွန်းတွေပဲ။
By Sann Maung Maung
This entry was posted on October 17, 2014 at 4:40 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.